Wbar-config: Qalab lagu habeeyo oo lagu habeeyo Wbar | Laga soo bilaabo Linux
Wbar-config: Qalab si loo habeeyo loona habeeyo Wbar
Maqaalka meesha ka hadlay w bar, Waxaan u sheegay in si aad u qaabeyso arjigan muuqaal ahaan aad uga baahan tahay codsi qof saddexaad oo la yiraahdo Wbarconf.
Hagaag sida muuqata horeyba w bar Waxaa ku jira qalabkeeda qaabeynta oo aanan dareemin. Diiwaanka in qalabkani ku jiro archlinux mana garanayo in gudaha la galay iyo in kale Tijaabada Debian Waxay ku jirtaa xirmada w bar, marka way fiicnaan laheyd hadday iga dhigin a Jawaab-celinta ku saabsan. Sikastaba ..
Oo waa inaan helnaa wax sidan oo kale ah, taas oo ah meesha astaamaha ama furaha lagu dhejiyo:
Tabka soo socda waxaan ku arki karnaa xulashooyinka lagu dejinayo cabirka iyo nooca font, asalka ah w bar, booska shaashadda .. iwm.
Ugu dambayntiina waxaan leenahay tabta aan ku habeynno saameynta: Cabbirka Icon, Saamaynta marka dulsaaraha lagu dul dhejinayo, Hufnaanta astaamaha iyo asalka ... iwm.
Nota: Fadlan haddii qofna adeegsanayo w bar en Tijaabada Debian ama qaybinta kale oo ii sheegi doonta haddii xirmada la helo wbar-conf, si loogu daro xogta ku jirta maqaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wbar-config: Qalab si loo habeeyo loona habeeyo Wbar
Waxaan isku dayay tijaabada Debian mana ahan. +1 loogu talagalay Arch, hahahaha.
wbar waligeed kuma darin GUI qaabeynta: Haa, runti, sawiradaas aad soo dhigtay waxay ka yimaadeen GUI ee ay tahay inaan rakibo si aan qaab ahaan ugu qaabeeyo wbar: S
Hagaag, Archlinux kaliya waxaan rakibey wbar waxaanan hayaa GUI aad ku aragto maqaalka. Haddii wbar ay ka mid tahay, ama haddii ay ku jiraan kuwa gacanta ku haya ee ku jira Arch ma ogi. Taasi waa sababta aan u weydiistay Jawaab celin ku saabsan qaybinta kale.
Hore, degel aad u wanaagsan, shaqo fiican.
Waxaan in muddo ah haystay su’aasha laakiin xal uma aanan helin. Waxaan ku rakibay wbar laba qaybood (ma xasuusan karo kuwan hadda), laakiin had iyo jeer waxay ku sii jirtaa daaqadaha hoostiisa, waxaan jeclaan lahaa inay siiso ikhtiyaarka ah inuu ka sarreeyo daaqadaha ugu sarreeya. Waqtiga ka mid ah waxaan isticmaalay halbeeg la mid ah wax sidan oo kale ah: - - miiska kor ku xusan », oo aan u maleynayay inuu dhibaatada ii xallin doono, laakiin ma ahayn wixii aan doonayay, waxaan u maleynayaa inay tahay haddii ay dhacdo in aan lagu soo bandhigin desktop-ka oo aysan shaqo ku lahayn. sidaa darteed waxaa lagu soo bandhigi doonaa daaqadaha ugu sarreeya. 🙂
Ku jawaab chlesdwin
Hmm, Marnaba uma baahnin Wbar inuu ka sarreeyo daaqadaha. Waa inaan baaro 🙂
Hagaag, haddii aan arko inay waxtar leedahay, maadaama haddii aan daaqadaha ballaadhiyey oo aan u baahanahay inaan marin ka helo wbar, waa inaan yareeyaa daaqadaha si aan u heli karo. Aniga iima muuqato mid wax ku ool ah.
chlesdwin, mar ayaan sidoo kale su'aashaas qabay, waxaan jaangooyay wax kasta oo aan kari karo nasiibdarrona wbar ma haysto ikhtiyaarkaas. Waa kharashka ugu fudud ee GNU / Linux deck.
Waad salaaman tahay, waxaan isticmaalayaa LMDE wbar-config-na ma jiro… sidoo kale pc-ga waa 64 jajab markaa ma jiro xirmo qaab dhismeedkeyga = (
Ku soo dhawow antolieztsu:
Haddii aadan dhib ka qabin, waxaad ku abuuri kartaa qaabeyntaada gacanta faylka ~ / .wbar. Faylka waa inuu lahaadaa wax sidan oo kale ah:
Waxa ugu muhiimsani waa 3-da sadar ee ugu horeysa, inta soo hartayna waa qotomiyada ...
Waad ku mahadsantahay soo dhaweynta ... waad ogtahay ugu danbeyntii inaanu si fiican u rarneyn = S Waan helay qaladaad, markaa waxaan doortay docky ... way fiicantahay in Linux aan ku haysanno fursado badan
Sawirku wuxuu u dhigmaa kun eray